Semalt Tips For Running A Blog Achibudirira
Chero e-commerce yepamusoro, kuchengetedza kukurukurirana nemutengi wakochinhu chinokosha pakuita basa. Blogs inogadzira kushamwaridzana kwakasimba nevatengi vako. Nokudaro, kuwedzera bhaibheri kune webhusaiti yedu ndeimwe yepamusoroinobudirira munzvimbo dze SEO mazano.
Nyanzvi ye Semalt Digital Services, Frank Abagnale anotsanangura zvinhu zvinokosha zvekushandisa bhajiti sechimbo chekuwedzera kukurukurirana nevatengi - referenzen einholen formular.
Kune ipi neipi yepaIndaneti, kuwedzera bhalogi zvinoreva kuti kuva nechikwata pane imwevanogona kugoverana zvikamu uyewo zvitsva zvine chokuita. Mune zvakawanda zvakanyatsogadzirisa maitiro ekugadzirisa maitiro, kazhinji pane chikamu che "blog" pairi.Kune vamwe vakukudziridza, kukodha blog kunogona kuva basa rakanaka, nekuda kwezvizhinji zvemasikirwo ehurukuro neCSS down-downs. Musiyano uri mukatia content management system iyo iri kushandiswa kwebhuku. Kune vanhu vakawanda, kuwedzera bhuti kunobatanidza zvakananga nekudhinda kwebhokisi.Mamwe mazano ekubvumira mabhii nokuda kwechinhu chako chinogona kusanganisira:
Nhau yezvakaitika kune webhusaiti yako
Chimwe chebasa, dhipatimendi kana basa
Usanyanya kunyanya kufunga nezvenyaya dzehutukutu pabhulogi yako.
Mumwe anogona kunge ane mibvunzo yese kana achibatanidza blog mune webhusaiti. Forchiitiko, mumwe angashamisika ROI, mari yekuchengetedza, yakagadzirirwa kugovera, sei kuwedzera bhalogi kune webhusaiti, kubhadhara freelancers nevadziriuye kugadzirisa zvinhu zvebhuku. Izvi ndizvo zvinokosha, asi hazvifaniri kutora nguva yako yakawanda.
Pfungwa yekugadzira blog haina kusanganisira zvakawanda zvehutano pakutanga.Chinangwa chebhuku rimwe nerimwe nderokusika nzira yakanaka uye yakanakisisa yekukurukura nevatengi vako. Iyo blog ndiyo motokari yekuita izvi kutaurazvinoitika, kwete teknolojia yekuisa webhusaiti yakanaka..
Unogona kuisa kukurudzira pane blog. Somuenzaniso, ngatiti zuva ravakadzi varo, neweuve ne-online fashion site. Pamusoro pe blog, unogona kusanganisira kupa kwakadai sa freebie. Somuenzaniso, iwe unogona kuti "Uya nemukadzi wako newe,uye iwe uchawana muchero wakasununguka. "Pane dzimwe nzira dzakawanda dzaungashandisa kutaura kune vatengi vako pakusimudza.Kuenzaniso:
1. Zviparidze mubhuku re blog. Iwe unogona kushandisa bhokisi reku blog kuti utsanangure zvinhu zvakasiyanayenyaya yako. Ichi chinyorwa chichabudiswa mu permalink.
2. Shandisa URL pane zvemagariro. Shandisa hutano hwemagariro emunharaunda yepakati kuti ubudise yakopost. Iwe unogona kushandisa matanho akachengetwa ayo anotaura nezveguta rako. Mitambo yezvemagariro evanhu yakadai sa LinkedIn uye Twitter inogona kuva nzvimbo yakanaka kutangakunokonzera kugovana.
3. Tumira email. Yeuchidza vanyori vako nezvekusimudzirwa. Yeuka kupachibatanidza kune chinyorwa uye chidimbu chezvakakunakira.
4. Gadzira mushandirapamwe weGoogle AdWords. Iwe unogona kushandisa mazwi emazwi ayo ari kutarisa imwechinhu munharaunda yako. Kugadzirisa zvinyorwa uye motokari ichayerera.
Chero ani zvake anogona kutanga kutanga mabhurogi chero nguva. Makambani akachengetwa zvakanaka akaisa vazhinjiblogs dzinobata zvakasiyana-siyana munharaunda yavo. Mawebhusayithi akawanda anogona kubatsirwa nekushandiswa kweblogi kunyange mumutambo we autopilot. A blog inogonaIva nzira yakanaka yekuramba uchitaurirana nevatengi vako. Inosanganisira zvinhu zvakasiyana-siyana zvakadai semashoko uye maforamu, anotangachikonzero chehukama hwakanaka hwekambani.